Udinga ummeli wokufika? Ukuxhumana Law & More BV
Umthetho wokufuduka ulawula izindaba eziphathelene nokwamukelwa, ukuhlala nokuxoshwa kwabafokazi. Izizwe zakwamanye amazwe ngabantu abangewona amaDashi. Lababantu bangaba ababaleki, kepha futhi namalungu omndeni wabantu asebevele bahlala eNetherlands. Kungenzeka futhi babe ngabantu abafuna ukuza bazosebenza eNetherlands.
KUDINGEKA LAWYER WOKWENGEZA IMEMIGRATION?
> Ukufaka isicelo sobuzwe beDashi
> Ukuhlangana kabusha komndeni
> Umfuduki onamakhono amakhulu
Abameli bethu bokufika bazokujabulela ukukusiza uma ufuna ukuletha imvume yokuhlala noma isicelo sendalo, umlingani wakho, ilungu lomndeni noma umsebenzi. Law & More ingakunika izeluleko noma ikwazi ukutholela yonke imvume yezicelo zokuhlala. Uma uhlelo lwakho lokusebenza laliwe Ingabe unawo umbuzo komunye wabameli bethu bokufika? Uma kunjalo, sizokujabulela ukukusiza.
Izibonelo zezihloko esingakusiza ngazo yilezi:
• Izimvume zokuhlala;
• Ukusungulwa kwendalo;
• Ukuhlangana kabusha komndeni;
• Ukufuduka kwabasebenzi;
• Abafuduki abanamakhono amakhulu.
Ungathanda ukuhlala eNetherlands?
Ukuhlangana kabusha komndeni
Awukho yini nomndeni wakho noma umndeni wakho awunawe? Thola esingakunenzela khona
Ngabe ufuna ukusebenza futhi uhlale eNetherlands? Singahlela inqubo yonke yesicelo
Umfuduki onamakhono amakhulu
Ngabe ufuna isisebenzi sakwamanye amazwe sisebenze ngokusemthethweni eNetherlands? Thola ukuxhumana
umhlangano, uhlelo olucacile
Izimvume zokuhlala njalo zifaka zonke izimvume zokuhlala ngaphandle kwezimvume zokuhlala endaweni yokukhosela. I-IND isebenzisa inqubomgomo evunyelwe yokuvuma. Isicelo semvume yokuhlala kungenzeka nje senqatshwe yi-IND uma imibandela ingahlangatshezwanga. Abameli bethu abokufika banolwazi lokufaka izicelo zezinhlobo ezahlukene zezimvume zokuhlala. Singahambisa izicelo zezimvume zokuhlala ezilandelayo:
• Imvume yokuhlala kabusha komndeni;
• Imvume yokuhlala ngokuzimele;
Imvume yokuhlala isakhamuzi EU;
Imvume yokuhlala abantu abafudukayo abanamakhono amakhulu;
• Ukufundwa kwemvume yokuhlala / unyaka wokusesha;
• Isikhathi sokuhlala;
Imvume yokuhlala lapho uhlala khona;
• Ukugunyazwa kokuhlala isikhashana (MVV).
Ukufaka isicelo sobuzwe beDashi
Uma ufisa ukufaka isicelo sobuzwe baseDashi, isicelo sokwethulwa kwendawo kumele yenziwe. Kunzima kaningi ukuzihlulela ukuthi uyakufanelekela yini ukwenziwa ngokwezemvelo. Usizo lommeli omuhle wabafuduki lubalulekile, ngoba izimo zivame ukuba nzima kakhulu. Ukuqaphela inqubo yesicelo se-Naturalization kubalulekile ukuze isicelo siphumelele. Udinga usizo ngokufaka isicelo sobuzwe baseDashi? Law & More ukukunikeza usizo olufanele futhi ukuxhasa ngesikhathi senqubo yonke. .
Izimo eziqinile zisebenza ekuhlanganiseni komndeni kabusha. Uma isimo singekho, isicelo sizokwenqatshwa. La malungu omndeni alandelayo afanelekele ukuhlangana kabusha komndeni.
• umlingani obhalisiwe;
• umlingani ongashadile;
• izingane ezincane.
Enye yezimo zokuhlangana komndeni ukuthi ofaka isicelo kanye nelungu lomndeni kumele okungenani babe nama-21 eminyaka ubudala. Ngaphezu kwabalingani, ababhalisile ababhalisile, abalingani abangashadile nezingane ezincane, abalingani bobulili obufanayo (abangashadile) nabo bangakufanelekela ukuhlangana kabusha komndeni.
Ungathanda ukuza eNetherlands ukuzosebenza lapha njengomuntu ofudukayo onamakhono amakhulu, ongumuntu ozisebenzelayo noma ozohlala lapha isikhathi esifushane ne-visa yebhizinisi? Abameli bethu bokufika bafike beluleke abasebenzi kanye nabaqashi ngamathuba futhi babaqondise kwinqubo yesicelo.
Enye yezindlela ezinhle zokuvumela isisebenzi sakwamanye amazwe ukuthi sisebenze futhi sisebenze ngokusemthethweni eNetherlands ukufaka isicelo semvume yokuhlala njengabafuduki abanamakhono amakhulu. Uma kunjalo, imvume yokusebenza ayidingekile. Isimo, nokho, ukuthi umqashi ubhaliswe eNetherlands njengomxhasi ovunyiwe we-IND. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi umfuduki onekhono kakhulu ahlangabezane nesidingo esithile sengeniso. Ithimba lethu labameli bokufika lingakusiza futhi singasifaka isicelo egameni lakho e-IND. Ungakuthanda lokhu? Sicela uxhumane Law & More.